28 no maty tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro ny masoivoho frantsay ao an-drenivohitr'i Burkina Faso
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » 28 no maty tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro ny masoivoho frantsay ao an-drenivohitr'i Burkina Faso
Olona 28 farafahakeliny no maty tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany akaikin'ny masoivoho frantsay ao Ouagadougou renivohitra Burkina Faso, araka ny loharanom-baovao avy amin'ny fiarovana frantsay sy afrikanina.
Nohamafisin'ny polisy teo aloha fa nisy nitifitra efatra ny miaramila nitifitra ary mpanafika telo indray no maty tamin'io tranga io. Manodidina ny 50 ny olona naratra tamin'ireny fanafihana ireny, hoy ny Reuters, izay mitanisa ny mpitondra tenin'ny governemanta Remi Dandjinou. Ny zandary dia misy zandary zandary roa, novonoina ho mpiaro ny ambasady frantsay, hoy i Dandjinou raha niresaka tamin'ny fahitalavi-pirenena.
Toerana maromaro no nokendrena tao an-drenivohitry ny firenena Afrikana Andrefana tamin'ny zoma, ao anatin'izany ny masoivohon'i Ouagadougou, ny foiben'ny tafika akaiky ary ny biraon'ny praiminisitra, izay ahiahiana fa mahery fihetsika Islamista.
Ny tatitra voalohany nataon'ny nanatri-maso dia nitantara ny lehilahy mitam-basy misaron-tava miaraka amin'ny kitapo mpiambina mpiambina eo am-baravaran'ny foiben'ny tafika, izay taorian'ny fipoahana. Nisy fanafihana hafa natomboka teny akaikin'ny biraon'ny praiminisitra, araka ny fanambarana nataon'ny polisy. Nalefa tany amin'ilay toerana akaikin'ny masoivohon'i Frantsa ny vondrona fiarovana, lasibatra ihany koa tamin'ilay fanafihana nifarimbona.
Ny mahery fihetsika Silamo dia ahiahiana ho ao ambadiky ny fanafihana ny renivohitra, raha ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny polisy ao Burkina Faso. Jean Bosco Kienou dia nilaza tamin'ny AP ny zoma fa "ny endriny dia ny fampihorohoroana." Voalaza fa naheno ireo mpiantsoantso niantsoantso “Allahu Akhbar” ireo vavolombelona talohan'ny nandrehitra ny fiara sy ny fitifirana teo alohan'ny ambasady.
Ny masoivoho frantsay any amin'ny faritr'i Sahel any Afrika, Jean-Marc Châtaigner, dia nilaza fa “fanafihana mpampihorohoro” tao amin'ny Twitter ny fipoahana ary nilaza tamin'ny olona izy mba hisorohana ny faritra afovoan-tanàna. "Fanafihana mpampihorohoro androany maraina tao Ougadougou, Burkina Faso: firaisankina amin'ireo mpiara-miasa sy namana Burkinabe," hoy i Jean-Marc Châtaigner nanoratra.
Ny masoivoho frantsay tany Burkina Faso dia niditra tao amin'ny Facebook mba hampitandrina ireo mponina ao an-toerana momba ny “fanafihana mitohy” ary nilaza tamin'ny olona mba “hihazona azy ireo foana. "Tsy misy azo antoka amin'izao dingana misy azy izao," vakio ilay fanambarana.
Lahatsary mivantana avy teny an-toerana tamin'ny zoma dia nampiseho setroka mainty nifofofofo avy amina tranobe may nirehitra teo akaikin'ny masoivoho, raha nitifitra avy hatrany ny basy. Ny faritry ny fipoahana dia voahodidin'ny tranom-panjakana sy ny masoivoho.
Nanoro hevitra ny olona ny masoivoho amerikana mba “hitady fialofana azo antoka” ao anatin'ny tatitra momba ny poa-basy tao amin'ny faritra afovoan-tanàna. Ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia nilaza fa manavao ny fivoaran'ny fanafihana izy, tamin'ny fanambarana navoakan'ny lapan'i Elysee tamin'ny zoma.
Ny sary nozaraina tao amin'ny media sosialy avy tany an-toerana dia nampiseho ireo sisa tavela tamin'ny fipoahana. Ny vera vaky avy amina varavarankely vaky am-polony tao amin'ny sisin'ny trano dia tazana niparitaka teny amin'ny arabe sy tamin'ny fiara nijanona, raha setroka mainty mavesatra kosa nameno ny lanitra ambony.